किन वेबसाइट RFPs काम गर्दैन
मंगलवार, मे 14, 2013 बुधवार, मई 15, 2013 माइकल रेनल्ड्स
एक रूप डिजिटल एजेन्सी १ 1996 XNUMX since देखि व्यापारमा, हामीसँग सयौं कर्पोरेट र गैर नाफामुखी वेबसाइटहरू सिर्जना गर्ने अवसर छ। हामीले मार्गमा धेरै कुरा सिकेका छौं र हाम्रो प्रक्रिया राम्रोसँग तेल भएको मेशिनमा पुगेको छ।
हाम्रो प्रक्रियाaबाट सुरु हुन्छ वेबसाइट खाका, जसले हामीलाई केही प्रारम्भिक प्रेप काम गर्न र ग्राहकलाई विवरणहरू हथौडा गर्न अनुमति दिन्छ हामी अझ टाढा उद्धरण र डिजाइनिंगको सडकमा जानु अघि।
यो प्रक्रिया साँच्चिकै राम्रो काम गर्छ भन्ने तथ्यको बाबजुद पनि हामी समय-समयमा भयread्करित आरएफपीको सामना गर्छौं। के कसैले RFPs मन पराउछ? मलाई त्यस्तो लाग्दैन। यद्यपि तिनीहरू संगठन सुरूवात बिन्दु खोज्ने आदर्श बन्न सक्छन् जब उनीहरूलाई वेबसाइट प्रोजेक्ट कार्यान्वयन आवश्यक हुन्छ।
यहाँ एउटा गोप्य कुरा छ: वेबसाइट आरएफपीले काम गर्दैन। तिनीहरू ग्राहकका लागि राम्रो छैनन् र तिनीहरू एजेन्सीका लागि राम्रो छैनन्।
यहाँ एक कथा छ कि के म बारेमा कुरा गर्दैछु भनेर वर्णन गर्दछ। हालसालै एउटा संगठन उनीहरूको वेबसाईटमा मद्दत खोज्न हामीलाई आएको थियो। तिनीहरूसँग आरएफपी सँगै राखिएको थियो सुविधाहरूको मानक सेट बाहेक, केहि अनौंठो अनुरोधहरू, र सामान्य इच्छा सूची आईटमहरू (राम्रो पुरानो मानक सहित: "हामी हाम्रो नयाँ वेबसाइट नेभिगेट गर्न सजिलो चाहन्छौं")।
अहिले सम्म, धेरै राम्रो। यद्यपि हामीले व्याख्या गरेका थियौं कि हाम्रो प्रक्रिया वेबसाइट ब्लुप्रिन्टबाट सुरू हुन्छ, जुन हामीलाई मूल्य निर्धारण गर्नु अघि थोरै परामर्श, योजना, र साइट म्यापि time समय दिनको लागि डिजाइन गरिएको हो। तिनीहरू अस्थायी रूपमा आरएफपी साइडमा राखे र ब्लुप्रिन्टबाट सुरू गर्न राजी भए र हामीले चीजहरू लात हान्दै।
हाम्रो पहिलो खाका बैठक को दौरान, हामी केहि विशिष्ट लक्ष्यहरु मा खने, प्रश्नहरु सोधे, र मार्केटिंग परिदृश्यहरु छलफल। हाम्रो छलफलको क्रममा, यो स्पष्ट भयो कि आरएफपीका केही आईटमहरू अब आवश्यक थिएनन् जब हामीले उनीहरूका केही प्रश्नहरूको उत्तर दियौं र वर्षौंको अनुभवको आधारमा हाम्रो सल्लाह प्रस्ताव गरेका छौं।
हामीले केही नयाँ विचारहरू पनि फेला पार्यौं जुन आरएफपीमा समावेश छैन। हाम्रो ग्राहक असाध्यै खुसी भयो कि हामी उनीहरूको आवश्यकतालाई "अनुकूलित" गर्न सक्षम भएका छौं र यो सुनिश्चित गर्न हामी योजनामा ​​के थियो भन्ने सम्बन्धमा हामी सबै एकै पृष्ठमा छौं।
थप रूपमा, हामीले ग्राहकको पैसा बचत गरे। यदि हामीले आरएफपीको आधारमा मूल्य उद्धृत गरेका थियौं भने, हामीले यसलाई आवश्यकताको आधारमा बनाउँदछौं जुन संस्थाको लागि वास्तवमा सही थिएन। यसको सट्टा, हामीले उनीहरूसँग विकल्पहरू प्रदान गर्न परामर्श दियौं जुन दुवै राम्रो फिट र अधिक लागत प्रभावी थिए।
हामी यो परिदृश्यलाई बारम्बार देख्छौं, यसैले हामी ब्लूप्रिन्ट प्रक्रियाप्रति यति प्रतिबद्ध छौं र किन हामी वेबसाइट आरएफपीहरूमा विश्वास गर्दैनौं।
यहाँ आरएफपीहरु संग मौलिक समस्या छ - ती संगठन द्वारा सहायता अनुरोध गरी लेखिएको छ, यद्यपि तिनीहरु preemptively सही समाधान भविष्यवाणी गर्न को लागी प्रयास गर्छन्। तपाइँलाई कसरी थाहा छ तपाइँलाई उत्पादन कन्फिगरेसन विजार्ड चाहिन्छ? के तपाइँ पक्का हुनुहुन्छ कि तपाइँ सदस्यहरु मात्र क्षेत्र समावेश गर्न चाहानुहुन्छ? किन तपाईं यो सुविधा मा यो सुविधा छनौट गर्नुभयो? यो डाक्टरको निदान र उपचार लिनको बराबर हो, तर तपाईको अफिस भ्रमण गर्नु अघि विशिष्ट औषधि माग्नु हो।
त्यसोभए यदि तपाइँ नयाँ वेबसाइट प्रोजेक्टको योजना गर्दै हुनुहुन्छ भने, कृपया आरएफपी बानीलाई भंग गर्ने प्रयास गर्नुहोस्। कुराकानी र योजनाको साथ सुरू गर्नुहोस् संग तपाईंको एजेन्सी (वा सम्भावित एजेन्सी) र तपाईंको वेबसाइट प्रोजेक्टमा बढि फुर्सत दृष्टिकोण लिनुहोस्। धेरै जसो तपाईंले पाउनुहुनेछ कि तपाईं राम्रो परिणाम पाउनुहुनेछ र तपाईंले केही पैसा बचत पनि गर्न सक्नुहुनेछ!
मई 14, 2013 मा 5: 25 PM
म असहमत छु। आरएफपीहरू केवल वेबसाइटहरूका लागि भयानक विचार मात्र हुन्, तिनीहरू कुनै पनि परियोजनाका लागि भयानक विचार हुन्।
कारणहरू ती हुन् जुन तपाईंले माथि उल्लेख गर्नुभयो। तर यहाँ आरएफपीहरूले काम नगर्ने सबैभन्दा आवश्यक कारणहरू छन्: तिनीहरू मान्छन् कि ग्राहकले पहिले नै सबै नवीनताहरू गरिसकेका छन्।
यदि तपाईं सहयोग बिना आविष्कार गर्न सक्नुहुनेछ, त्यसोभए यसले तपाईंलाई मद्दत गर्दछ जुन तपाईंलाई आवश्यक छ सोच्न मद्दतमा तपाईंको दृष्टिकोणको बारेमा के भन्छ?
मई 15, 2013 मा 1: 48 PM
प्रतिक्रियाको लागि धन्यबाद, रोबी! हो, म सहमत छु ... मँ जे जान्दछु त्यहीँ राख्न चाहन्थें 🙂
मई 14, 2013 मा 6: 29 PM
म एक वेबसाइट को लागी एक RFP आधारित एक प्रस्ताव प्रदान गर्दछ, तर यो ग्राहक द्वारा एक धेरै ठूलो लगानी आवश्यक छ किनकि हामी चाहिएको भन्दा परियोजनाको काम भन्दा चलिरहेको सम्बन्ध छ।
मई 15, 2013 मा 7: 51 एएम
डिट्टो के रोबीले भने।
मई 16, 2013 मा 11: 47 एएम
राम्ररी भनिएको। यो वेबसाइटहरूका लागि सत्य हो ... र प्रत्येक अन्य उत्पादन वा सेवा जुन पूर्ण वस्तु होइन। आरएफपीहरूले चीजहरूको मात्रा (जुन हामी उनीहरूलाई एक स्प्रेडशीटमा तुलना गर्न सक्छौं) मापन गर्न कोसिस गर्छौं जसले परिमाण प्रमाणित गर्दैन। जबसम्म तपाईं उद्धृतको लागि सोध्नु हुँदैन, भन्नुहोस्, फलामको ढु p्गाको रेलमार्गको कार (र सायद पनि होईन!), तपाईंले विश्वास गर्ने प्रदायकहरूको पहिचान गर्न आवश्यक छ र तिनीहरूलाई प्रक्रियाको सल्लाहकार हुन अनुमति दिनुहोस्। अन्यथा, परिणाम "कागजमा राम्रो देखिन्छ" भन्ने एक हो, तर जे वास्तविक संसारमा राम्रोसँग काम गर्दैन।
मई 16, 2013 मा 12: 43 PM
मन पराउँछु! धन्यवाद, क्रिस।
मई 16, 2013 मा 12: 23 PM
निष्कर्ष: धेरै जसो ग्राहकहरू वास्तवमै उनीहरूले के चाहान्छन् जान्दैनन्, तर प्राय: सबैलाई उनीहरूले के चाहिन्छ भनेर थाहा छैन …… एजेन्सीहरूबाट अनन्त प्रचार… ..